နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: June 2010
အတ္တ တစ်ခုကို ပုံဖော်ခြင်း။
ဒီလိုနဲ့ ကြယ်တွေ ငိုတဲ့ညကို ငါလွန်ခဲ့တယ်...။
တိမ်ခါးခါးတွေကတော့ အခုထိ တောက်နေတုန်း...။
ငါ့လက်ထဲက မရှိမုန့်ကို လာလာတောင်းနေတော့
အိတ်ထဲက အလွမ်းတစ်ဆုပ် ကြဲပေးလိုက်တယ်...။
နိုးချိန်တန်လို့မှ ထ မလာတာ ငါ့အပြစ် မဟုတ်...။
ငတက်ဖြားက ငါ့ကို သူခိုးလို့ လာဟစ်နေတယ်...။
မင်းသား မဟုတ်တောင် ဆိုင်းနောက်ထ လို့
ဟန်ဆောင် မျက်နှာဖုံး ကွာကျတော့
ငြီးနေတဲ့ လျှာနှစ်ခွနဲ့ မြေခွေး ဖြစ်နေပါရော့လား...။
ငါ့ကျောမှာတော့ သွေးတွေ စက်စက်ယိုလို့...။
အဒ်ဂါ အယ်လဲန်ပိုး၊ ဆီမွန် ဒီပူးပွား
နင့်မှာ ချိုနှစ်ချောင်းတောင် ရှိခဲ့ပေမယ့် လိုက်မဝှေ့ခဲ့ပါလား...။
လင်းပိုင်လို အမြီး ရှိပေမယ့် ရေမကူးခဲ့ပါလား...။
ရှေ့မှီ နောက်မှီ ပုဂ္ဂိုလ်များ ပြောခဲ့ကြတယ်...။
၀က်ပျိုမ များကတော့ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ လျော့လျော့သွားတာပဲ...။
(တစ်ကယ်တော့ အပုပ်ကောင်ကို စားတဲ့ လင်းတ တစ်မျိုးပါ...။)
ရေခြား မြေခြားမှာ နေတတ်အောင် နေပါ့လား...။
သာဂိ လေးဂွစာ မိသွားလို့
အရှေ့မြောက် လေစီးကြောင်းထဲ မပါသွားပဲ နေဦးမယ်...။
နက္ခတ်တွေ စုံတော့မယ့်နေ့ကို ရောက်တော့မယ်...။
နေမင်းနဲ့လွဲလို့ ငိုနေခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး...။
တစ်ရက်လောက် လွဲတာနဲ့ ဘာမှ ဖြစ်လောက်မှာ မဟုတ်ဘူး...။
(အလွမ်းသင့် ကွင်းပြင်ကို ဖြတ်တိုက်လာသော မကျေနပ်ခြင်း လေညှင်းများကို ခံစားထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အရမ်းကာရော ဘာသာပြန်လိုပါက မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်ကို သတိချပ်လေ...။)
စာကြွင်း။ ။ ဆားချက်တာနော်။ ဆားချက်တာ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 9:38 PM 18 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Apple release iOS 4
new downloadable firmware for iPhone3,1: 4.0
(8A293) - http://ios.e-lite.org/ #ios #apple #iPhone3,1
အိုင်ဖုန်း အတွက် OS အသစ်ဖြစ်တဲ့ iOS4ကို အခုအချိန်က စပြီး Download လုပ်လို့ရနေပြီလို့ လာပြောတာ။ အိပ်ပြီ။ ဒေါင်းလုပ်ပြီးသွားပြီ။ JailBreak တွေ ပေါ်လာမှ သွင်းမယ်...။ :P
You can download here alternatively...(This is for iPhone 3GS.)
Total Filel Size is 579MB. (It took me9min to download it. luckily I was at the first5min to get the downloading queue. Some failed to download it.)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:17 AM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: iOS 4, iPhone 3GS
ဒီမနက် Gmail ကို Sign in မဝင်ခင် http://mail. google.com စာမျက်နှာမှာ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့အတွက် Google Lab ကနေ အသစ် ထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ ဖန်ရှင် အသစ် ကို မိတ်ဆက်ပေးထားတာ သိရတယ်။
အားလုံး သိကြတဲ့ အတိုင်း ဂျီမေးလ်ထဲက ဘယ်ဘက်ကော်လံမှာ chat လုပ်လို့ရတဲ့ နေရာလေး ရှိတယ်။
Gtalk ထဲကို တိုက်ရိုက် မဝင်ချင်သူတွေ မေးလ်စစ်ရင်းနဲ့ ဂျီမေလ်းထဲက ပါလာတဲ့ ဒီ GChat function လေးကို သုံးလို့ လွယ်တာပေါ့လေ...။
နောက်ပိုင်း အဲဒီ GChat မှာ Video Chat, Video Calling တွေပါ ရအောင် လုပ်လာတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ Video Call, Video Chat function ကို လူတိုင်းက အလွယ်တကူ မသုံးကြဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေက chtting ထိုင်တယ်ဆိုရင် Gtalk ပဲ သွားသွားဖွင့်နေကြတာကိုး။ နောက်ပြီး Gtalk မှာကျတော့ အဲဒီ Video Chat Function ထည့်မထားတော့ မသိတာများတယ်။
အခုကျတော့ ဒီ Gmail ထဲက Gchat မှာ TextChat, Voice Chat, Video Chat အပြင် Group Chat ဆိုတဲ့ function ကို ကနေ့ ထပ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တော့ Gmail ထဲက chatting style ကို မနှစ်သက်ပါဘူး။ Gtalk ကနေပဲ ချက်တာ ကြိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လောလောဆယ် ဒီ Gmail ထဲမှာ Group Chat ကို ပေးထားတယ် ဆိုတော့ စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။
Feed Back လေးများ ပေးကြပါဦး။
အကျယ်ကို ဖတ်ချင်ရင် Google Blog ဖြစ်တဲ့ ဒီနေရာ မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:26 AM 12 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
စုံစီနဖာ အမှတ်စဉ် (မသိ/မမှတ်မိ ၀၂)
ညဦးပိုင်း မအိပ်ခင်မှာ ရှုးပေါက်ထားရင် မနက်လင်းအားကြီးမှာ ထစရာ မလိုဘူး။
Apple အနေနဲ့ iPhone တွေကို perfect prototype, reliable OS တွေ မဖြစ်မချင်း အသစ်တွေ ခဏခဏ မထုတ်သင့်ဘူး။ 3GS ထုတ်တာ တစ်နှစ်တောင် မပြည့်သေးဘူး။ အခု 4G ဆိုတာ ကို လာမယ့် တနင်္လာနေ့မှာ ကျင်းပမယ့် WWDC မှာ ကြေငြာမယ်လို့ ကောလဟဠတွေ ဖတ်နေရလို့ လက်ထဲက ဖုန်းကိုပဲ လွင့်ပစ်ရတော့မလိုလို။
တစ်ကယ်က အိုင်ဖုန်းက spec အပိုင်း ပြောရရင် သူများတွေလို စုံစုံလင်လင် ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ apps တွေ စုံတာရယ်၊ touch response က သူများတွေထက် ကောင်းတာရယ်မို့ သုံးဖြစ်တာ။
အိုင်ဖုန်းကို ဂျေးဘရိတ်လုပ်လိုက်တာ ပိုကောင်းလာတယ်။ အရင်ကထက် response ပိုနှေးသွားတယ်လို့ သတိထားမိတယ်။ (Jail Break ၂ လ သက်တမ်း အတွေ့အကြုံအရ။)
အဝတ်လျှော်စက်ထဲမှာ တပ်ထားတဲ့ Belt က Elastic properties လစ်မစ် ကုန်သွားရင် အဝတ်တွေကို ကောင်းကောင်းမညှစ်တော့တာ သိရတယ်။
ဖေ့ဘွတ် သိပ်မသုံးသင့်တော့ဘူး လို့ ထင်တယ်။ (ဆင်ခြေ- ဗရိုက်ဗေစီ မရှိတာ၊ နောက် ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ပုံတွေကို ဖေ့ဘွတ်ထွင်တဲ့သူတွေက ကြိုက်တဲ့နေရာမှာသုံးခွင့်ရှိတယ် ဆိုတာကို မကြိုက်တာ။)
မြန်မာသံရုံးက ဝန်ထမ်းတွေ အသစ်တွေ ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ ရောက်ဖူးတဲ့ လူတွေက ပြောတယ်။ ကိုယ်တို့က အသစ်လား အဟောင်းလားဆိုတာ သုံးနှစ်တစ်ခါ သက်တမ်းတိုး အခွန်ဆောင်မှ ရောက်တာ ဆိုတော့ မသိပါဘူး။ အဲ.. ၁၀ နှစ် တစ်ခါလောက် အဲဒီ သံရုံးမှာ ဝန်ထမ်း အပြောင်းအလဲ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့လဲ ကိုယ်မသိဘူးပေါ့လေ။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် စာအုပ် သက်တမ်းတိုး၊ အခွန်ဆောင်၊ စာအုပ် အသစ်လဲ စတာတွေ ဘာပဲလုပ်လုပ် စာအုပ်အသစ် နံပါတ်အသစ်ကို မဖြစ်မနေ ပြောင်းရတော့မယ် ဆိုပါတယ်။
ပထမ တစ်ရက် - ကိုယ်ဘယ်ရက်အတွက် ဖောင်တင်ရမယ်ဆိုတာကို ကျူနံပါတ် သွားယူရပါမယ်တဲ့။ သံရုံးထဲကို ရုံးဖွင့်ချိန်အတွင်း သွားပြီး နာမည် စာရင်းပေး။ အဲဒီမှာ ကိုယ် ဘယ်နေ့ လာပြီး ဖေါင်တင်ရမယ် လက်ဗွေနှိပ်ရမယ်ဆိုတာ သိပါတယ်တဲ့။ (တစ်ပတ်ကနေ နှစ်ပတ်လောက် ခွာချိန်းပါမယ်။)
ဒုတိယ တစ်ရက် - သံရုံးကဖေါင် သွားဖြည့်ရပါမယ်။ လက်ဗွေနှိပ်ရပါမယ်။ ဖေါင်တင်ရပါမယ်။ ငွေ ၁၅၀ ပေးရပါမယ်။ အဲဒီမှာ သူတို့က နောက်ရက်တစ်ရက်ကို သတ်မှတ်ပေးပြီး စာအုပ်အသစ် လာထုတ်ခိုင်းပါမယ်။ (ဒါလဲ ၁ ပတ်ကနေ ၂ ပတ်ကြာမယ်။)
တတိယ တစ်ရက် - စာအုပ်အသစ် သွားထုတ်လို့ရပါပြီ။ အဟောင်းကို ချက်ချင်း ပေးလိုက်ချင်လဲ ရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံက ရုံးတွေမှာ ကိုယ့်ပါတ်စ်ပို့ ကို update အကြောင်းကြားမယ်ဆိုရင် အဟောင်းကို အသစ်ထုတ်ပေးပြီး တစ်လအတွင်း သုံးခွင့်ရှိပါမယ်။ အဟောင်းကို တစ်လအတွင်း မြန်မာ သံရုံးကို ပြန်အပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
9. ချစ်သူကို လွမ်းတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 10:39 AM 22 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
USD 3.00 တန် အခမဲ့ ဖုန်းခေါ်ခွင့်
မြန်မာပြည်ကို ဖုန်းခေါ်ခတွေ ဈေးကြီးပါတယ်။ ဖုန်းတစ်ခါခေါ်ဖို့ အရေး ပြောစရာ စကားတွေ စီရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်ကို အားအားယားယား ဆက်ချင်တိုင်း ဆက်လို့ မရပါဘူး။ မနေ့က အင်တာနက် လျှောက်ဖွင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ ဆိုဒ်တစ်ခု တွေ့လာပါတယ်။ http://www.tipmeet.com ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်လေးပါ။
သူက VoIP ဆိုဒ်ပေါ့လေ။ အင်တာနက်ကနေ ဖုန်းတွေကို ခေါ်ဆိုမှု ဝန်ဆောင်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းပေါ့။ အသစ်ထင်ပါရဲ့။ စဖွင့်ဖွင့်ချင်း ဆိုတော့ ပရိုမိုးရှင်းတွေ ပေးနေတယ်။
အကောင့်အသစ် စဖွင့်ဖွင့်ချင်းကို ယူအက်စ် ၃ ဒေါ်လာ အလကား ပေးထားပါတယ်။ မနေ့က ဖွင့်ပြီး မြန်မာပြည်ကို လှမ်းခေါ်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ညပိုင်း ဖုန်းခေါ်ကြည့်တာ ကြည်ပါတယ်။ နေ့ခင်းပိုင်းမှာတော့ ရုံးက အင်တာနက်လိုင်းနဲ့မို့လို့ အဆင်မပြေပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေကို လှမ်းဖွင့်ခိုင်းတော့ သူတို့လဲ ဆက်ကြည့်တာ အဆင်ပြေတယ် ဆိုလို့ အခုလို မျှပေးလိုက်ရပါတယ်။
ပျော်ပျော်ကြီး အကောင့်တွေ ဖွင့်ပြီး မြန်မာပြည်ကို ဆက်ကြပါကုန်။
(ဖုန်းကုမ္ပဏီက သိရင်တော့ ကွန်ပလိမ်းတွေ လာတက်တော့မှာပဲ။)
အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာက အကောင့်တွေ ဖွင့်လို့ မေးလ်တွေ ထည့်ရတော့မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ Primary Email မသုံးပါနဲ့ ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အလကားရတဲ့ Gmail/Yahoo/Hotmail မှာ အီးမေး အကောင့်တွေ စိတ်ကြိုက် ဖွင့်ပြီး သုံးပါ။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:51 PM 8 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
New Procedure to change your Myanmar Passport at Singapore (Unconfirmed News)
Forward မေးလ်ကနေ ရလာတာလေးပါ။
သေသေချာချာ ကွန်ဖမ်း ဖြစ်မဖြစ် မသိရသေးပေမယ့် အင်ဖော်မေးရှင်း အနည်းအကျဉ်းတော့ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Credit to original mailer.
One of my friend explained to me about the procedures and info of New MM Passport Switching Proc:.
He has already changed the new passport afew days ago.
Here are the procedures as follows,
1. In MM Embassy
Require to pay tax till Dec -2009.
Require to go personally for thumb print.
Submit the information with old passport and then come back again next (xx) days to collect back.
After that, Passport no. will be changed (start with M XXXXX)
Get3years validity from new passport issued date, regardless of existing validity period.
Required to pay 150 SG$ for new passport with3years validity period.
2. After you received the new passport, go to MOM (SP/EP) or ICA (PR) and go to reception to get the change passport form.
Fill the form and update the new PP No. as in counter accordingly.
For PR, will be received Re-entry permit letter and ICA may not endorse in your passport like as previously.
3. You may need to return back your old MM passport within 1 month to MM embassy.
Please update any related organizations accordingly, if any.(eg: bank, loans. etc)
No need to update separately for other GOV agency, if you have already updated in ICA or MOM.
အားလုံးပဲ ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး စာအုပ်အသစ် သွားလဲကြစို့လား....။
စာအုပ်အသစ် လျှောက်နေတုန်း မရခင် စပ်ကြားမှာ အဟောင်းကို လက်ဝယ် ကိုင်တွယ် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်လို့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ပြောပြပါတယ်။
အဟောင်းမှာ သက်တမ်းတစ်နှစ်မက ကျန်သေးသူတွေအတွက်ကတော့ နှမြောစရာပေါ့နော်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:42 PM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
New Procedure to change your Myanmar Passport at S...